Reniranon'i Yangtze: toetra, fampiasana, zavamaniry ary biby | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 18/05/2022 10:00 | Ciencia
El renirano yangtze any Shina dia renirano manaitra izy io izay mirefy 6.300 1.800.000 kilometatra eo ho eo ary XNUMX XNUMX XNUMX kilometatra toradroa ny velaran-drano. Izany no mahatonga azy io ho renirano fahatelo lehibe indrindra eran-tany, aorian'ny Amazonia sy ny Neily, ary ny renirano lava indrindra ao amin'ny taniny sy ny kaontinanta.
Noho izany antony izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny maha-mahatalanjona ny Reniranon'i Yangtze, ny toetrany ary ny maro hafa.
2 Famokarana sy fampiasana ny Reniranon'i Yangtze
3 zavamaniry ao amin'ny renirano yangtze
5 Ny reniranon'i Yangtze
Zava-dehibe amin'ny tanin'ny Sinoa ny fikorian'izy io satria 40%-n'ny rano misy eto amin'ny firenena. Ankoatra izany, eo amin'ny sehatra ara-toekarena, ny renirano dia singa manan-danja amin'ny famokarana fambolena. Etsy ankilany, ny ranony dia manompo ny tobim-pamokarana herinaratra mahery vaika indrindra ao Shina sy ny tohodrano lehibe indrindra eran-tany, ny Tohodranon'i Three Gorges.
Ny salan'isan'ny reniranon'i Yangtze dia 31.900 m³/s, izay an'ny karazana monsoon., dia voan'ny orana manomboka amin'ny volana Mey ka hatramin'ny Aogositra, ary mitombo ny fikorianan'ny voalohany ary avy eo mihena ny volana Septambra ka hatramin'ny Aprily. Ny ririnina no vanim-potoana ambany indrindra.
Manana fanitarana maherin'ny 6.000 kilometatra ary koveta maherin'ny 1.800.000 kilaometatra toradroa. Amin'ny fitambarany, laniny ny ampahadimin'ny velaran-tanin'i Shina. Mandritra izany fotoana izany, ny ampahatelon'ny mponina rehetra dia miaina ao anatin'ny faritra misy azy. 20% amin’ny harinkarena faobe ny fiantraikany amin’ny toekarena.
Noho ny halavany dia mitana ny anaram-boninahitra ny renirano fahatelo lava indrindra eto an-tany, ary koa ny renirano lava indrindra mikoriana ao amin'io firenena io ihany. Avy any andrefana ka hatrany atsinanana, mamakivaky faritany 8, kaominina 2 mivantana eo ambanin'ny Governemanta Foibe, ary ny Faritr'i Tibet Autonomous, mihodinkodina sy miolikolika mankany an-dranomasina.
Ny tapany afovoany sy ambany dia heniheny sy farihy samihafa, izay mifamatotra ka mamorona karazana tranon-kala mamela ny fizarana biby. Very anefa izany noho ny fanovana ny dingana azony tamin’ny olombelona.
Mirefy 6.000 XNUMX kilaometatra mahery ny Reniranon’i Yangtze ary mijoro ho vavolombelona momba ny kolontsaina sy ny tontolo iainana manankarena sy samihafa. Avy amin'ny Naxi sy Tibetana monina any an-tendrombohitra lavitra ny tontolo hafa, amin'ny alàlan'ny toerana masina bodista sy fialan-tsasatra, mankany amin'ny faritra indostrialy.
Famokarana sy fampiasana ny Reniranon'i Yangtze
Manana anarana hafa izy io isaky ny faritra iadidiany. Nantsoina hoe Dangqu, na Drichu, izy io tamin’ny voalohany. Eo afovoany dia antsoina hoe Reniranon'i Jinsha izy io. Antsoina hoe Renirano Chuantian na Reniranon'i Tongtian ny renirano etsy ambany.
Ny voka-dratsin'ny tanàna midadasika toy izany dia ny fahasamihafan'ny toetr'andro. Ny Reniranon'i Yangtze dia mikoriana mamakivaky ny sasany amin'ireo "tanànan'ny fatana fandoroana" malaza ao Shina ary mafana be rehefa fahavaratra. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia miaina faritra hafa izay mijanona mafana mandritra ny taona ianao sy faritra miaina ririnina mangatsiaka be.
Ny Lohasahan'i Rio Azul dia lonaka. Ny Reniranon'i Yangtze dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanondrahana ny voly voamaina, miaraka amin'ny velaran-bary lehibe indrindra, izay maneho ny 70 isan-jaton'ny famokarana, varimbazaha sy vary orza, voamadinika, toy ny tsaramaso sy katsaka ary landihazo.
Atahorana ny renirano fandotoana, fanjonoana tafahoatra, tohodrano be loatra ary fandripahana ala. Na izany aza, na dia eo aza ireo fanairana ireo, indrindra noho ny habetsahan'ny mponina sy ny fiantraikany amin'ny bibidia, ny renirano dia mijanona ho iray amin'ireo vondron-drano be karazana indrindra.
zavamaniry ao amin'ny renirano yangtze
Any amin'ny toerana samihafa manamorona ny Reniranon'i Yangtze, dia nodiovina ny zavamaniry, indrindra ho an'ny olona. Izany dia maneho fandrahonana mahatahotra toy ny very ny fahafahany mitroka rano ny zavamaniry, izay mety hitarika ho amin'ny fahaverezan'ny toeram-ponenana.
Na dia eo aza izany antony mahatonga ny tsy hamantarana ireo karazan-javamaniry teratany sy izay nampidirin'ny olombelona, ​​dia mbola hita ny zavamaniry mahazatra ao amin'ny renirano, indrindra any amin'ny faritra tsy dia misy mponina toy ny any ambony sy any amin'ny faritra afovoany.
Eny an-tendrombohitra no misy ny tendrony ambony amin'ny renirano misy hazomalahelo toy ny hazomalahelo sy zenevrie, ary koa hazo madinika alpine hafa. fizarana afovoany Misolo tena azy ny ala hazo mafy sy ny kirihitrala, ary ny farany dia lemaka izay matetika tondraka ny morony.
Ny lalana ambany kokoa sy be mponina no tena ampiasaina amin'ny fambolena voamadinika, ary saika nokapaina avokoa ny zavamaniry mahazatra amin'ny faritra, ka kirihitra vitsivitsy sisa no tavela. Eo amin’ny vavahadin-drano, rehefa mikoriana any an-dranomasina, dia hita ny zava-maniry anaty rano toy ny honko.
Ny Reniranon'i Yangtze dia iray amin'ireo ranon-javamananaina indrindra eran-tany. Tamin'ny fianarana 2011, Tsy nisy afa-tsy 416 karazana trondro, izay manodidina ny 112 no tsy fahita firy any amin’ny ranony. Misy karazany 160 eo ho eo koa ny amphibians, sy ny biby mandady sy ny biby mampinono ary ny voromanidina izay misotro ny ranony.
Ny trondro be mponina indrindra ao amin'ny Yangtze dia ny cyprinides, na dia hita amin'ny isa kely kokoa aza ny karazana hafa ao amin'ny baiko Bagres sy Perciformes. Amin'izy ireo, Tetradentate sy Osmium no tsy fahita firy.
Ny anton-javatra toy ny fanjonoana tafahoatra, ny fandotoana ary ny isan'ny trano manelingelina ny fizotry ny renirano dia nifarana na nanimba ireo karazana tsy fahita firy, izay 4 amin’ny 178 ihany no afaka mipetraka amin’ny lalan’ny renirano manontolo.
Ny karazana sasany izay tsy hita afa-tsy ao amin'io faritra io dia ny Yangtze sy ny Sinoa sturgeon, ny porpoise tsy misy vombony, ny sturgeon fotsy, ny alligator, ny trondro mainty avaratra, ary ny salamander goavambe sinoa.
Teo aloha, ny Yangtze dia fonenan'ny karazana roa malaza indrindra amin'ny loza ara-tontolo iainana: ny sokatra malefaka sy ny feso Yangtze, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe sokatra malefaka fotsy. Samy nambara fa lany tamingana avokoa izy roa ireo rehefa tena tandindonin-doza.
Ny reniranon'i Yangtze
Mba hihazonana ny fikorianan'izy io mafy, ny Reniranon'i Yangtze dia mahazo sakeli-drano be dia be avy amin'ny loharano mankany amin'ny toerana halehany, ankoatra ny rano azony mandritra ny vanim-potoanan'ny orana. Total, misy fantsona kely 700 mahery mamahana ny Yangtze. Ny tena manan-danja amin'ireo dia ny zom-pirenena Han, izay eo amin'ny dingana mpanelanelana.
Ny renirano lehibe indrindra any amin'ny faritra ambony amin'ny Reniranon'i Yangtze dia ny rafi-drano Jinsha-Tongtian-Tuotuo, ny Reniranon'i Yalong sy ny Reniranon'i Minjiang, ary ny tendrony ambony amin'ny Reniranon'i Wujiang.
Ary eo amin'ny tapany afovoany, dia mahazo rano avy amin'ny Farihy Dongting, izay Ny Yuan, Xiang ary ny renirano hafa kosa no mamatsy azy. Fanampin'izany, ny elany havia dia mandray ny Reniranon'i Han, ary ny reniranon'i Huaihe no mivarina any ambany. Niverina tany amin’ny Farihin’i Poyang ny Reniranon’i Yangtze taloha, saingy efa maina izy io ankehitriny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Reniranon'i Yangtze sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Ciencia » Renirano Yangtze
Arahiko isan'andro ny fampahalalana sarobidy anananao izay mameno ny fihetseham-poko amin'ny fampitomboana ny kolontsaiko amin'ny ankapobeny
Nahoana no betsaka ny horohoron-tany any Granada?